Ny fironana famolavolana sary manan-danja indrindra amin'ny taona 2018 | Famoronana an-tserasera
Ny fironana lehibe indrindra amin'ny famolavolana sary ho an'ny taona 2018
Melissa Perrotta | | Graphic Design
Afaka tapa-bolana miala amin'ny famitana ity 2017 ity isika ary miaraka amin'ny taona vaovao, dia holazainay aminao ny inona fironana vaovao amin'ny famolavolana sary izay ho hitantsika.
Mazava ho azy, ny fironana dia fiheverana tena maharitra izay mandalo fiovana amin'ny bisikileta sy haingana. Amin'io lafiny io, ny fironana hitantsika tao anatin'ny roa taona lasa dia halazo haingana eo imason'ny fomba feno fanandramana sy lalao.
1 Vokatry ny glitch
2 Vokany simba
3 Duo tone amin'ny fampisehoana indroa
4 Vokatry ny fantsona miloko
5 Toerana ratsy sy typografika ratsy
6 Fanoharana ara-javakanto
7 Typography ho an'ny zava-drehetra
8 Loko marevaka
Vokatry ny glitch
Ny fironana voalohany amin'ny taona ho avy. Ny effets glitch dia hita foana ho olan'ny mpijery. Izany dia satria nipoitra avy lesoka tsy niriana vokarin'ny rindrambaiko mandritra ny fanodikodinana ireo sary. Saingy, amin'ity taona ity isika dia hianatra hampiasa sary simba amin'ny fanomezana azy ireo fahatsapana hatsarana vaovao.
Raha mitady ho maloto ny taona 2017, dia hadio sy hahafinaritra amin'ity taona ho avy ity no ho fanoherana. Ity no fomba hahitantsika ity fironana vaovao ity izay atolotry ny tanan'ny zavakanto ankehitriny. Vokatr'izany dia hanana ny fahafaha-misafidy ny rovitra, voarodana, rovitra, teboka loko ary collage farany amin'ny fanekena tsara.
Duo tone amin'ny fampisehoana indroa
La fironana izay ho mpiorina voalohany amin'ity taona ho avy ity. Hotazoninay ny feon'ny duo izay kintana tamin'ny taona lasa. Hanampy trotraka indroa amin'ireo sary izahay izao mba hananana endrika tsy misy dikany sy diso.
Ity vokatra ity dia azo amin'ny alàlan'ny fanaovana dika mitovy ny sary na ny fampiasana sary roa mifanindry miloko samy hafa samy manana loko monochrome.
Vokatry ny fantsona miloko
Ny fanodinkodinana ny sary dia ho iray amin'ireo fironana lehibe indrindra amin'ny taona vaovao. Izany no ahafahantsika mamela ny tenantsika hilalao sary ary hanome azy ireo fahatsapana hatsarana vaovao hiteraka voka-dratsy.
Toerana ratsy sy typografika ratsy
Rehefa lasa miabo ny ratsy dia rehefa tonga ny tena fanovana. Ny toerana ratsy dia sarotra foana ny miasa miaraka satria mila fahalalana bebe kokoa momba ny trangan-javatra mahatsapa fahitana izany. Izao no fomba ireo singa avy any aoriana dia mihodina mankany aloha ary ireo avy eo aloha mankany aoriana, samy amin'ny endritsoratra sy singa ary sary.
Amin'ity taona ity ny fanehoan-kevitry ny fihetsika dia mila hery bebe kokoa. Ny zava-drehetra mifandraika amin'ny famokarana tanana toy ny sary sy collage. Afaka mahita isika avy eo sary natao ho an'ny typografika, typografika ampiharina amin'ny sary, sary misy sary aminy ary collage izay mifangaro sary, sary ary sary.
Typography ho an'ny zava-drehetra
Ny typography dia lasa kintan'ny antoko, taorian'ny fikarohana nandritra ny taona maro. Ho hitantsika manokana ny fifantohana typografia fanandramana na famoronana izay azo ampiasaina miaraka amin'ireo fironana voalaza etsy ambony. Raha ny fahitana azy dia hiverina amin'ny taona 90 isika miaraka amin'ny famoronana nataon'i taratasy tapaka, mikorontana, tsy mifanaraka amin'ny fomba mahazatra. Ho hitantsika ihany koa fa ny typography dia lasa singa telo-dimensional.
Fironana iray izay hitohy ny loko marevaka. Nampiasaina hatramin'ny faran'ny taona lasa izy ireo ary antenaina mbola hitohy ny fangatahana mandritra ny taona 2019 ihany koa. Ankehitriny ny gradients loko, mampiasa alokaloka mba hiteraka 3D, tetezamita loko, Etc.
Amin'ity taona vaovao ity dia ho afaka hametraka ny herintsika hamorona amin'ny lafiny maro isika. Amin'ny alàlan'ny foto-kevitra momba ny sary an-tsehatra, ny fampiasana loko marevaka, ary ny fampidirana ny typografia, dia ho hitantsika fa manjavozavo ny fetra ary misy ny fahafaha-mampiasa bebe kokoa amin'ny fampiasana loharano.
Eto ianao dia manana tutorial avy amin'i Crehana hahatratrarana ny sasany amin'ireo effets voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny fironana lehibe indrindra amin'ny famolavolana sary ho an'ny taona 2018
Tsiambaratelo ho an'ny mpamorona lehibe ho an'ny fametrahana pejy tonga lafatra
Loko isan-karazany: fampiasana sy fitambarana